Ny satroka tsilo Starfish | Reef Resilience
Ny kintan'ny kotrokorana. Sary © Stacy Jupiter / Marine Photobank
Ny kintan'ny kotroka (COTS) (Acanthaster planci) dia voajanahary voajanahary (izany hoe nihinana polyps) amin'ny haran-dranomasina izy ireo. Voafehy amin'ny lokony lava misy poizina izy ireo, ary miloko manga amin'ny manga sy mena ary mena. Amin'ny ankapobeny dia 25-35 cm izy ireo, na dia mety ho lehibe na 80 cm.
Ny kintana misy kotroka dia hita manerana ny faritr'i Indo-Pasifika, izay miseho amin'ny Ranomasina Mena sy ny morontsirak'i Afrika Atsinanana, manerana ny Oseana Pasifika sy Indiana, mankany amin'ny morontsiraka andrefan'i Amerika Afovoany. Ireo mpandroba an'ny COTS dia ahitana ny sifotra goavambe (Charonia tritonis), ny kintana sy ny tsiranoka pufferfish (Arothron hispidus), ny triggerfish (Balistoides viridescens), ary ny humphead maori wrasse (Cheilinus mandrobona).
Ny tsilo maranitra no marefo amin'ny hazandrano rehetra, ary ny safidiny sy ny fitondran-tsainy dia miovaova amin'ny alàlan'ny toetr'andro, ny fihetsiketsehana rano, ary ny fomba fiasa. ref Ny COTS dia mazàna kokoa manome sakafo amin'ny vatohara fisakafoana sy ny latabatra (ohatra, Acropora), izay mitovy habeo izay mora voadona amin'ny fongana. Na izany aza, rehefa ambany ny fifehezan'ny haran-dranomasina noho ny habetsahan'ny COTS na ny tontolo iainana, dia mety hihinana karazana hafa toy ny COTS Porites na vatohara folyose (oh Montipora). Ankoatra ny vatohara mafy dia mety hihinana sponges, vatohara malefaka, algà, ary zavamaniry misy alikaola koa ny COTS.
Ambony: COTS eo amin'ny latabatra Acropora. Ny haran-dranomasina efa hatry ny ela (mainty), mihetsiketsika ho algom-bara (maitso-mavo), mankany amin'ny vatohara vao maty. Ambany: COTS miaraka amin'ny fotsy fotsy hoditra amin'ny vatohara. Sary © © Nature Conservancy
Na dia somary ambany aza ny isan'ny COTS amin'ny haran-dranomasina, indraindray izy ireo dia miseho amin'ny goavam-be antsoina hoe "misavoana". Ny lanjan'ny voajanahary avy amin'ny COTS dia 6-20 km2 izay latsaky ny 1 isaky ny hektara. ref Ny fipoahana dia matetika voafaritra hoe 30 na kintana lehibe kokoa mihoatra ny hektara amin'ny vatohara, ref na rehefa mahatratra ny hafanam-po toy izany izy ireo dia mihalany ny vatohara haingana kokoa noho ireo vatohara izay mety hitombo. ref Ny COTS dia afaka manaparitaka ny haran-dranomasina mivantana amin'ny vidin'ny 5-13 m2 isan-taona. ref
Amin'ny alàlan'ny fipoahana matetika, ny COTS dia afaka mitana anjara toerana manan-danja eo amin'ny sehatry ny harena voajanahary amin'ny alàlan'ny fanampiana hihazonana ny fahasamihafan'ny karazam-biby. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fihenan'ny fivoahana sy ny mety maty momba ny haran-koditra dia mitovy amin'ny fihenan-tsakafo sy ny fihenan'ny vokatra. ref Ny COTS dia mety hanampy amin'ny fananganana toeram-ponenana ho an'ny haran-dranomasina mihamitombo satria ny COTS dia tia maniry ireo vatohara haingana kokoa. Na izany aza, ny anthropogene sy ny fihenjanana hafa mifandraika amin'ny fipoahan'ny COTS matetika dia mety hiteraka fahasimbana goavana amin'ny vatohara, ary ny COTS dia heverina ho loharanon-kery lehibe indrindra amin'ny vatan'ny vatohara ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe, Aostralia. ref Ny vatoharan-dranom-bary mahasalama dia afaka miala amin'ny rotsak'i COTS ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny taona 20, saingy ny haran-dranomandry manjavozavo dia miadana be sy miovaova ny fiovaovan'ny toetrandro ary mety tsy ho tafavoaka eo anelanelan'ny fipoahana. ref
Ny fipoahan'ny COTS dia mampitombo ny habetsaka ao anatin'ny folo taona farany, ary niteraka fahasimbana goavana tamin'ny vatohara any Indonezia.ref Ny fikambanam-behivavy goavam-be ataon'ny COTS dia afaka manala vatohara amin'ny 90% amin'ny vatohara velona. ref Tao amin'ny 1970 tao amin'ny Haram-barotra Great Barrier Avaratra, nisy ny fipoahan'ny COTS izay naharitra valo taona. Io fipoahana io dia nihodidina ny kintana 1,000 isaky ny hektara, namela ny vatohara 150 tsy nisy vatohara, ary ny harambato 500 dia simba. ref Ao amin'ny Nosy Togian any Sulawesi Afovoany, Indonezia, mihoatra ny 80% ny haran-dranomasina amin'ny haran-dranomasina dia ravan'ny COTS. ref Ny fahavoazana avy amin'ny COTS dia mety hanimba indraindray ny isan'ny trondro izay miankina amin'ny vatohara ho an'ny toeram-ponenana. Ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe, roa karazana trondro lolo izay mihinana ny haran-dranomasina ary karazana karazan-trondro karazan-tsakafo manjavozavo taorian'ny fisongan'ny COTS. ref
Inona no mahatonga ny COTS miposaka?
Tsy fantatr'ireo mpahay siansa hoe inona no mahatonga ny fipoahan'ny COTS, fa ny iray amin'ireo fanombohan-kevitra amin'ny ankapobeny indrindra dia ny fivoahan'ny COTS amin'ny ankapobeny amin'ny fitantanana ny fisiana phytoplankton.ref Ny fampiroboroboana ny ala avy amin'ny fiotazana ny fambolena dia mety hitarika ho any COTS satria ny elefanta avo lenta dia miteraka ny voninkazo ho an'ny phytoplankton izay manome loharanom-bary ilaina ho an'ny molekiola COTS. ref Ohatra, ao amin'ny Haran-dranomasin'ny Barra Lehibe, dia mitombo avo roa heny ny tahan'ny fototarazo lehibe mifandray amin'ny fihenan'ny 10-fold amin'ny fivoarana, fivoarana ary fahaveloman'ny COTS. Ny mpahay siansa hafa dia mihevitra fa ny COTS dia mifamatotra amin'ny vanim-potoana Hetsika El Niño ref na voatarika amin'ny fanesorana ireo mpihaza COTS. ref
Fanaraha-maso ny COTS
Ny mpangalatra iray dia manangona kintana-kisoa-kisoa ao anatin'ny tetikasa AWARE amin'ny fanadiovana rano ao amin'ny Tenggol, Malezia. Sary © 2010 Mohd Halimi Abdullah / Marine Fotobank
Ny programa dia novolavolaina manapaka ny COTS. Ny fomba fiasan'ny COTS dia ny fanangonana kiraro amin'ny rivotra ary ny fandevenana azy ireo, ny fametrahana azy amin'ny rivotra mipoitra, ny fikarakarana azy amin'ny masoandro, mametraka azy ireo amin'ny vokatra simika misy poizina (ohatra: formaline, ammonia, sirafika varahina), ary manangana fefy ambanin'ny ranomasina mba hifehy ny hetsika COTS. Ny fomba fanolorana ao amin'ny Haran-dranomasin'ny Barrage Lehibe dia ny fanangonana salohim-bozaka ao anaty kintana izay mamono ny kintana nefa tsy manimba ny tontolo manodidina ny haran-dranomasina manodidina. ref Ny fomba fiasa mahomby amin'ny fitantanana ny COTS dia lafo sy miasa mafy, ka mety ho voamarina amin'ny haran-dranomasina kely ihany izay manana lanjany ara-tsosialy na ara-biôlôjika, toy ny toerana maloto, toetoetran'ny mpizahatany, na faritra manana fari-pahaizana mahatalanjona. ref
Institute of Marine Sciences (AIMS) - Fikarohana momba ny Krônôfa
TANJONA - Fanaraha-maso ny moron-dranomandry amoron-dranomasina any amin'ny harambato lehibe
Bibidia matevina ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe
Fandalinana ny tranga mikasika ny COTS fitantanana iombonana ao Filipina